रामायण सर्किट र राम–राज्य | Nagarik News - Nepal Republic Media
७ जेष्ठ २०७५ १२ मिनेट पाठ
रामायण सर्किटभित्र लुकेको राम–राज्यको राजनीति बुझ्न वर्चश्वको सिद्धान्तलाई बुझ्न जरुरी छ । वर्चश्व (हेजीमोनी) के हो ? कालिन्स समाजशास्त्रीय शब्दकोशअनुसार हेजीमोनीको अर्थ हो— एउटा वर्गद्वारा अर्को वर्गमाथि वैचारिक÷सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित गर्नु । यस्तो प्रभुत्व सामाजिक संस्था तथा सांस्कृतिक संरचनामा निहित तŒवबाट बनावटी सहमति वा सर्वसम्मतिद्वारा स्थापित हुन्छ । हेजीमोनी सिद्धान्तको प्रतिपादन इटालीका चिन्तक अन्तोनियो ग्राम्सीले गरेका थिए । ग्राम्सीले पँुजीपतिले राज्यसत्ताको प्रयोगबाट शोषित÷शासित समुदायलाई दमन गर्ने सन्दर्भमा परिभाषित गरेका थिए । उनको मतअनुसार शोषण, दमन तथा वर्चश्व केवल राजनीतिक मात्र नभएर सांस्कृतिक तथा सामाजिक अभ्यासबाट पनि हुन्छ । पुँजीवादी समाजका प्रमुख संस्थाहरू ः रोमन क्याथोलिक चर्च, न्यायपालिका, शिक्षा व्यवस्था, प्रचार माध्यमबाट यस्तो अभ्यास गरिन्छ । ती संस्थाका विचार र अभ्यासले आम मानिसलाई प्रभावित पार्छन्, आफ्ना विश्वास स्वीकार गर्न प्रोत्साहित गर्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा शासक वर्गलाई हुन्छ । किनभने त्यसले शासक वर्गको शासन सत्तालाई वैधानिकता प्रदान गर्छ।
वर्चश्व भौतिक मात्र हुँदैन सामाजिक तथा सांस्कृतिक पनि हुन्छ । मूलनिवासी दलित बहुजनको सन्दर्भमा हिन्दुत्वको भौतिक आक्रमण मात्र भएको होइन, सवर्ण विचारधाराबाट पनि हमला भएको देखिन्छ । हेजीमोनीको सिद्धान्तलाई राम–राज्यको सन्दर्भमा हेर्दा यहाँ पनि सवर्णको शासन शोषित÷शासित दलित बहुजनमाथि सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा लागु भएको देखिन्छ।
राम–राज्यको नाममा सवर्णहरूले वर्चश्व कसरी स्थापित गरे ? यसका लागि उनीहरूले सजिलो उपाय खोजी गरे। उनीहरूले यस्तो सामाजिक संस्थाको निर्माण गरे, जसबाट आफ्नो विचारधारालाई पनि बल पुग्यो । धार्मिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था, पुस्तक लेखन, शास्त्र लेखन, विभिन्न स्मृति साहित्यको विकास र प्रचार आदिले महत्वपूर्ण भूमिका खेले । उदाहरणका लागि, शोषित÷शासित दलित बहुजन मान्ने गर्छन् ः धर्म सबैका लागि समान हो । धर्म पालन गरेर स्वर्गलोक जान सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । स्वर्गलोक नामको कुनै स्थान छँदै छैन भन्ने कुराको जानकारी उनीहरूलाई छैन । यो विचारधारा कसको हो त ?
यो विचारधारा सवर्णको हो । उनीहरूले यही विचारधाराबाट दलित बहुजनलाई भ्रमित पारेका छन् । उदाहरणका लागि, स्वर्ग जाने अनुष्ठान, पूजा–पाठमा ब्राह्मणले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छन् । यिनै सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक प्रक्रियाबाट वर्चश्व कायम गरिएको छ । शिक्षण संस्था, राजनीति र राम–राज्यमाथि पनि यही विचारधाराको कब्जा छ । सवर्ण विचारधारालाई मूलनिवासी दलित बहुजन आफ्नो जीवन पद्धति मान्छन्।
बहुजन सामाजिक मुद्दाका लेखक दयाराम ‘राम रामायण का सच’मा लेख्छन्, वाल्मीकि रामायणको तथ्यबाट के प्रमाणित हुन्छ भने रामायणको रामको जन्म अयोध्याको धर्तीमा भएको होइन, तर पनि रामको अस्तित्व भारत र नेपालको जनमानसमा विद्यमान छ । रामायणको विचारधारा भाग्यवाद, पुनर्जन्म, अन्धविश्वास, पाखण्ड र चमत्कारमा आधारित छ । यो विचारधारा हेजीमोनीका रूपमा आमजनको व्यवहारमा परिलक्षित छ । रामायणको रचना रामको समकालीन महर्षि वाल्मीकिद्वारा गरिएको होइन । रामायण बुद्धभन्दा पछिको रचना हो । इतिहास साक्षी छ, मधेसको गौरवशाली इतिहासको अन्त्य मौर्य सम्राट् बृहद्रथको सेनापति पुष्यमित्र शुंगबाट भएको हो । सेनापति पुष्यमित्र शुंगले पूर्व नियोजित योजनाअनुसार मौर्य सम्राट् बृहद्रथलाई हत्या गर्छन् र बौद्ध भिक्षुहरूलाई कत्लेआम गर्न आदेश दिन्छन् । चारैतिर भयावह स्थिति छाउँछ । यही कालखण्डमा मूलनिवासी दलित बहुजनलाई शिक्षा, सम्पत्ति र शस्त्रबाट वञ्चित गरिन्छ । यही समयमा उनीहरूलाई चार वर्णव्यवस्थाअन्तर्गत शुद्रका रूपमा चौथो वर्णमा राखेर विभिन्न जातजातिमा विभाजन गरिन्छ । वर्ण मूलतः तीन मात्रै थियो, पछि पुष्यमित्र शुंगको कालमा चौथो वर्णका रूपमा विकास गरियो।
वर्ण र जातव्यवस्थालाई यथावत राखीछाड्न पुष्यमित्र शुंगका छोरा अग्निमित्रले आफ्नो नेतृत्वमा अन्य धर्मग्रन्थसँगै वाल्मीकि रामायणको रचना गर्छन् । भयको वातावरणमै भ्रमको सूत्रपात ब्राह्मण धर्मग्रन्थको माध्यमबाट हुन्छ । यो भ्रमलाई धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक माध्यमबाट हेजीमोनीलाई स्थापित गरिन्छ । भ्रमलाई वर्चश्वमा बदल्न सत्ताको आवश्यकता हुन्छ। सत्तामा स्थापित रहिरहन मूलनिवासी दलित बहुजनलाई स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य र मोक्षको मार्गरूपी त्रास दिइरहन्छ।
दयारामका अनुसार पुष्यमित्र शुंगका छोरा अग्निमित्रले जुन बेला मूलनिवासी दलित बहुजनलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरेका थिए, दलित बहुजनको कल्याणका नाममा ‘रामनाम’को प्रचारका लागि बौद्ध भिक्षुको रूपधारण गरी सन्त पैदा गरे । बौद्ध धर्म सवर्णको घुसपैठकै कारण दुई शाखा ः हिनयान र महायानमा विभाजन भयो । दशरथ जातक कथाको रामलाई रामायणको राम घोषणा गरियो । राम नामको गुणको दस्तावेज आमजनलाई सत्य लाग्न थाल्यो । प्रचार गरियो, राम कथाको श्रवण फलदायी हुन्छ । यसको प्रमाण वाल्मीकि रामायणका विभिन्न श्लोकमा पढ्न सकिन्छ । रामको जन्म भएको थिएन अवतारका रूपमा अवरण भएको थियो । त्यस्तै, विदेह सीताको जन्म देह बाहिरबाट भएको थियो । मनुष्यको जन्म मनुष्यको देहबाट हुन्छ तर विदेहको जन्म धर्तीबाट भएको भनिन्छ । कतिसम्म भ्रमित बनाइएको रहेछ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको मूल हतियार धर्मको आडमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक वर्चश्व नै हो।
राम नामको महिमामण्डन चलिरहोस् भनेर आर्य ब्राह्मण कथा प्रसंगलाई व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरियो । आर्य ब्राह्मणहरूलाई सदैव आफ्नो संस्कृतिप्रति लगाव थियो । वाल्मीकि रामायणको भाषा संस्कृत थियो । आमजनताले रामको तथाकथित आदर्श र मर्यादालाई आत्मसात गराइरहन आफ्नै बीचबाट ब्राह्मण सन्त तुलसीदासलाई अगाडि सारे, जुन बेला कबीर र रैदासले रामलाई नकार्ने वा अस्वीकार गर्ने कार्यको सुरुवात गरे । आर्य ब्राह्मणले रामायणको रामको अस्तित्व बचाउन रामचरित्र मानसको रचना तुलसीदासबाट गर्न लगाए । राम र रामायणलाई बचाउन वाल्मीकि रामायणभन्दा तुलसीदासको रामायणको प्रमुख भूमिका छ, जसलाई रामचरित मानस भनिन्छ । यो त्यही शास्त्र हो, जसबाट मूलनिवासी दलित बहुजनमाथि वर्चश्व कायम गरियो । यस्तो सवर्ण वर्चश्व मूलनिवासी दलित बहुजनको सहमतिमा टिकेको छ । जुन दिन मूलनिवासी दलित बहुजनले सहमति तोड्छ त्यो दिन सवर्ण वर्चश्व समाप्त हुन्छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वैशाख २९ गते तीर्थयात्रीका रूपमा जनकपुरबाट नेपाल भ्रमण गरे । उनले ‘जय सीयाराम’को नारा लगाए । उनको भ्रमण धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वर्चश्वको एउटा कडीका रूपमा भएको हो भने कुरा सहजै भन्न सकिन्छ । नागरिक अभिनन्दनको क्रममा उनले भने, सीताबिनाको राम अधुरा छन् । तर, कथित मर्यादा पुरुषोत्तम (अमर्यादित) रामले सीतालाई गरेको दुव्र्यवहार र अपमानको कुनै चर्चा गरेनन्।
भ्रमणको क्रममा मोदीले ‘रामायण सर्किट’को घोषणा पनि गरे । रामायण सर्किट राम–राज्यको एउटा कडी हो । राम–राज्यको मतलब स्पष्ट छ । राम–राज्यमा दलित दलित नै हुन्छ, ब्राह्मणब्राह्मण नै । उदाहरणका लागि, राम–राज्यरूपी योगी–राजमा दलित, मुस्लिममाथिको चरम दमन दैनिक रूपमा पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाइन्छ । राम–राज्यको विधानमा सामाजिक प्राणी र सामाजिक शक्तिको मानक फरक–फरक हुन्छ । मूलनिवासी दलित बहुजन सामाजिक प्राणी हुनेछन् भने सवर्ण सामाजिक तथा राजनीतिक शक्ति हुनेछन् । यो विभाजन ‘जय श्री राम’को राजनीतिक भाष्यमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । ‘रामायण सर्किट’को घोषणाबाट मैथिल सामन्तहरू खुस छन् । मोदीको भाषणमा मैथिली शब्द प्रयोग भएपछि मैथिल सामन्तहरूमा ऊर्जाको सञ्चार भएको छ । यो खतरनाक कुरा हो ।
(रजक दलित बहुजन अभियन्ता हुन्)
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७५ ०९:०८ सोमबार
रामायण सर्किट राम–राज्य